Warbaahinta Bulshadu ma Istaraatijiyad SEO ah baa? | Martech Zone
Warbaahinta Bulshada ma tahay Istaraatijiyad SEO ah?
Tuesday, May 17, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Tim Piazza
Maaha wax aan caadi ahayn khabiirada suuqgeynta raadinta inay ka wada hadlaan oo ay wadaagaan xeeladaha loogu talagalay hirgelinta suuqgeynta warbaahinta bulshada sida istiraatiijiyad SEO ah. Sida iska cad, inbadan oo ka mid ah taraafikada webka ee ka bilaabi jirtay matoorada raadinta ayaa hada waxaa wada wadaaga bulshada, iyo suuqleyda soo galaysa, isha weyn ee taraafikada lama iska indho tiri karo.
Laakiin waa fiditaan mala awaal ah oo jiidaya suuqgeynta warbaahinta bulshada hoosteeda dalladda istiraatiijiyadda SEO. Waa la siiyay, waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartid markaad fulineyso olole suuqgeyn ah oo suuq geyn ah oo saameyn togan ku yeelan doona SEO (tweets calaamadeysan, tusaale ahaan) laakiin suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa aad uga badan kor u qaadista muuqaalka natiijooyinka mashiinka raadinta.
Si aad u noqoto mid cadaalad ah (oo aan u ciyaaro u doodaha shaydaankayga) waxaa jirta faa iido weyn in magacaaga la galiyo qiimeynno badan oo bulsheed iyo bogag dib u eegis ah sida ugu macquulsan maxaa yeelay waa macquul marka qof uu raadinayo wax soo saar ama adeeg, tixraacyada ganacsigaaga goobaha taraafikada ee sareeya waxay garaaci karaan tartame bogga koowaad. Markay dhacdo, taasi waa guul.
Laakiin guuleysta ama ha guuleysan, waa ciyaar qaldan. Markaad dadka ku dhex gasho suuqgeynta warbaahinta bulshada, waxay horeyba ugu jiraan mashiinkaaga. Ujeeddadu maaha wacyi-galin xilligan. Raadintu waa faa'iido dabada-dheer ah oo kaqeybgalka, laakiin maahan sababta loo sameeyo. Markaad ku hawlan tahay warbaahinta bulshada, waxaad durbaba dhiseysaa kalsooni, barashada baahiyaha iyo xiisaha macaamiishaada, iyo boos u sameynta garoon. Haddii aad diirada saareyso faa'iidooyinka SEO, waxaad daawaneysaa kubad qaldan.
SEO iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada waa labadaba howlo muhiim u ah guusha internetka waxayna ku shaqeeyaan riwaayad, sida guurka. Laguma biirin sinta. (farshaxanka loo aaneeyey Lee Odden)
Tim Piazza wuxuu bah wadaag la yahay Social LIfe Suuq geynta iyo aasaasaha ProSocialTools.com, khayraad ganacsi oo yar si loogu gaadho macaamiisha maxalliga ah warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta moobiilka. Marka uusan abuurin xalal cusub oo dardar gelinaya howlaha ganacsiga, Tim wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro mandolin iyo farsamada gacanta.
Miyuu Biz-ka Bulsheed ee Bulshadu isbedelay?
10 Talaabo oo loogu talagalay Qorista Boostada wax ku oolka ah
May 17, 2011 at 3: 32 PM
Dhammaan waxay kuxirantahay sida aad u qeexdo SEO.
haddii aad u jeeddo in lagugu hagaajiyo bartaada qaar kds SM ma noqon doonto caawimaad badan sida haddii aad ula jeedo hagaajinta guud ahaan guryaha websaydhka ku xidhan ganacsigaaga.
May 17, 2011 at 5: 41 PM
Waxaan u maleynayaa inaad tixraaceyso farqiga udhaxeeya bogga iyo bogga kafiican iswaafajinta. Si kastaba xaalku ha ahaadee, wali waa SEO ee ma ahan suuqgeynta warbaahinta bulshada. Dhaqdhaqaaq kasta oo bulsheed oo ka dhaca goobta oo la qoro waxay kaa caawineysaa hagaajinta goobtaada, sida waxqabad kasta oo bulsheed oo ka dhaca goobta-ka-baxsan oo la qoro waxay kaa caawin doontaa is-hagaajintaada goobta. Muhiimadda ugu muhiimsani waxay tahay in lagu caddeeyo doorkaaga - ma wadaysaa wacyigelin, mise hawlgab beelid ah?
May 18, 2011 at 4: 33 AM
Mahadsanid, Lee. Warbixinta eMarketer waxay hubaal ka tarjumaysaa waayo-aragnimadayda macaamiil ahaan alaab adag. Waan hubaa in natiijooyinka ay aad u kala duwanaan doonaan marka la fiirinayo suuqyada sida maqaayadaha, halkaasoo bulshada / moobiilku ay wax weyn ku kordhinayaan saameynta macaamiisha.
May 19, 2011 at 8: 15 AM
haa baraha bulshada waa istiraatiijiyad seo ah… waxay ku siineysaa soo bandhigid dheeri ah adoo la wadaagaya qoraalada, qoraalada udhaxeeya asxaabta..taas oo gacan ka geysaneysa kordhinta taraafikada .. adeegsiga baraha bulshada ee iskuxirka horumarinta waa faa iido iyo geedi socod soo ifbaxaya ..
May 19, 2011 at 3: 41 PM
Alok, xaqiiqdii waxaad cadeyneysaa bartaada adoo abuuraya xiriir ganacsi SEO ah adoo adeegsanaya faallo bulsheed. Tani waxay ku weydineysaa su'aasha… ma waxaad igu mashquulineysaa wadahadal, mise waxaad si fudud u adeegsaneysaa aaladda warbaahinta bulshada si aad u abuurto wacyigelin? Xiriiriyaha gadaal miyaa ka qiimo badan yahay fursadda aad kula yeelan karto wadahadal aniga oo aasaasa xiriir isla markaana abuura kalsooni? Wadaagida xiriiriye-gadaal ma si toos ah ayuu kuu aasaasayaa inaad tahay qof si fudud u xiiseynaya qiimaha SEO ee barxadda bulshada?
Waxaad sidoo kale muujineysaa ujeedkeyga, in warbaahinta bulshada iyo SEO ay u baahan yihiin habab kala duwan si ay waxtar u yeeshaan. Iyadoo la adeegsanayo SEO, ku-dhufasho-iyo-socod ayaa fulisa hadafka. Adeegsiga baraha bulshada si aad iigu badasho macmiil waxay u baahan tahay in ka badan faallo iyo xiriirin. 🙂
May 19, 2011 at 6: 28 PM
Si la yaab leh, waa inaan tirtiraa faallooyinka Alok maxaa yeelay wuxuu isku dayay inuu ku tuuro backlink xanaf leh!
May 20, 2011 at 2: 06 PM
Waxaan u maleynayaa inuu Alok ujeedkeyga ii sameeyay, ka dib. Qofka diiradda saaraya SEO, warbaahinta bulshada ayaa si fudud u ah barnaamij kale oo lagu hirgeliyo istiraatiijiyadooda isku xirnaanta. 🙂
Oktoobar 24, 2011 at 1:56 PM
aniga ahaan waa istiraatiijiyad .. dhisida bulshada bulshada xayaysiinta fudud ee ganacsigaaga. maxaa yeelay dadka bulshada bulshada ka mid ahi waxay noqon karaan il weyn oo qiimo qaatayaal ah.